Nagu saabsan - Nanchang Fontainebleau Qalabka Rinjiyeynta Warshadaha Co., Ltd.
Waxaan rajeynayaa in qof walbaa uu ka heli karo burushka ugu fiican Maple Golden.
Nanchang Fontainebleau Rinjiyeynta Qalabka Industrial Co., ltd waxay ku takhasustay wax soo saarka iyo iibinta burushka farshaxanka, oo ay ku jiraan biyo-biyoodka / saliidda / burushka qurxinta iyo burushyada qurxinta. Waxay leeyihiin astaan ​​u gaar ah- Maple Dahab ah, waxaa loo yiqiinay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee farshaxanka ugu caansan Shiinaha ee Shiinaha. Waxay bixiyaan dhammaan noocyada adeegga OEM, sidoo kale waxay kaa caawin karaan inaad abuurto burush kuu gaar ah iyo summad. Xitaa haddii aad haysato xogta burushka, markaa way soo saari karaan, sida ku xusan codsigaaga inaad soo saarto burushyo badan oo kala duwan. Waxay ka caawiyeen macaamiisha inay abuuraan sumado badan oo caan ah adduunka oo dhan.
Tani waa qoys burush ah oo leh qaab qadiimi ah oo burush lagu sameeyo. Sanadkii 2008, burushyada Dahabka Maple ee Dahabiga ah ayaa horseed u noqday jidkooda ganacsiga shisheeyaha. Hadda burushka farshaxanka ee Golden Maple ayaa si wanaagsan looga soo dhoweeyay Shiinaha.
taas oo ah mid kamid ah soosaarayaasha burushka ugu weyn ee Shiinaha, waxayna aad iyo aad uga heshay amaan fanaaniinta caanka ah ee Dibadda. Wixii ku saabsan warshadooda, waxay shaqeynaysay 30 sano, waxay leedahay khibrad hodan ah oo ku saabsan soosaarida burush rinji farshaxan. Dhammaantood waxaa laga sameeyaa gacmo-gacmeed, ka dib marka burushka la dhammeeyo, waxay yeelan doonaan xakamaynta tayada adag. Soosaarida burushyo wanaagsan, warshaddu waxay kaloo iibsataa mashiinno badan oo casri ah.
Waxay soo ururiyeen farshaxanno caan ah iyo farsamayaqaanno farshaxanno farshaxanno isugu jira, ujeeddadeeduna tahay abuuridda burush tayo sare leh, gaar ah, caan ah oo loogu talagalay farshaxanno cayiman. Waxay u heellan yihiin farshaxanka farshaxanka wanaagsan iyo inay siiyaan habab cusub oo ay ku sahamiyaan hal-abuurkooda, iyaga oo u oggolaanaya inay shaqadooda la wadaagaan bulshooyinka adduunka. Waxay qaataan fikradaha cusub, waxay raadiyaan tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay iyo agabkii - waqtigooda u huraan abuurista qalabka farshaxanka adduunka ugu wanaagsan, oo ay adeegsadaan qaar ka mid ah fannaaniinta adduunka.
Waxay ku taal gobolka Jiangxi, magaalada Wengang, oo ah waddanka ugu da'da weyn burushka Shiinaha oo leh taariikh ka weyn 1600 sano jir.
- Nanchang Fontainebleau Qalabka Rinjiyeynta Warshadaha Co., Ltd ..
Waxay ku taal gobolka Jiangxi, magaalada Wengang, oo ah waddanka ugu da'da weyn burushka Shiinaha oo leh taariikh ka weyn 1600 sano.
Wengang waxaa lagu sharfay inuu yahay magaaladii burushka Shiinaha laga soo bilaabo 2004.
Sida shirkadeena, waxaan leenahay in ka badan 30 sano oo khibrad ah soo saarista noocyo badan oo kala duwan naqshadeynta burushka rinjiga farshaxanka, waxaan u abuurnay buraash badan oo kulul macaamiisheena.
Marka laga reebo jilicsanaanta, timaha xayawaanka gaarka ah, Dhamaan burushyada kale oo leh muunad bilaash ah.
Taageero Xoog leh
Tirooyinka dalabyada yar yar ee Maple Golden ayaa la taageeraa, qiimaha astaanta ayaa ah hal mar oo lacag ah.
OEM oo leh astaantaada
Waxaan u fidinaa adeegga OEM soo dejiyaha / jumladle / tafaariiqle. OEM daabacaadda daabacaadda gacanta iyo xirxirida ayaa la heli karaa.
Dammaanad qaado tayada
Nidaamka tayada sare leh iyo nidaamka maaraynta tayada ayaa xamuulka ka dhigi kara isla shaybaarka la xaqiijinayo.
Dhammaan waraaqaha ayaa looga jawaabi doonaa 24 saac gudahood inta lagu jiro maalinta shaqada.